China 3D Nylon Yakadhindwa Carpet Tiles YH Series fekitori uye vagadziri | DEDGE
Nhoroondo & Tsika
Exhibition & Kushanya
Nyowani Spc Flooring
Yakakwira Glossy Laminate Flooring
Chiedza uye Rima Laminate Floor
Isina mvura Laminate Flooring
Dombo Vinyl Flooring
DRM Injiniya Yepasi
Classic Injiniya Mapuriro
Herringbone Injiniya Yepasi
Matombo Matsva eKapeti
Zvinhu zvenaironi Carpet usina kukonekita
Kushongedza & Matiles
UV Inopenya SPC Wall Sheet
Sintered Dombo SPC Wall Sheet
Wpc Yekushongedza Lines
Aluminium Yekushongedza Lines
Good Quality Mdf richigadzirisa kuti Laminate Wooden Flooring
30mm Natural Green Chakagadzirwa Turf
3D Nylon Yakadhindwa Makapeti Tiles YH Series
Nyowani Co-Kuburitsa Solid WPC Kurongedza Yepamusoro Series
4mm Yakanakisisa Vinyl Flooring
China EIR laminate pasi
Kunze Wpc Panel Kupeta 219.28mm
100% Waterproof Bathroom Wall ukomba Cladding - Woo ...
Makapeti mataera / Hofisi Kapeti / Modular Kapeti
Chivako chemahofisi, nzvimbo yekumirira nhandare yendege, hotera, bhangi, furati, imba yekuratidzira, mosque, Kereke, imba yemusangano, nzvimbo yekutandarira, mukoridho, mukoridho, kasino, nzvimbo yekudyira nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji.
Mutsvuku fiber 100% Zvinhu zvenaironi
Chii chinonzi Carpet tiles?
Carpet Tiles inowanzozivikanwa se "Patch Carpet," inova mhando nyowani yekugadzira zvinhu zvine elastic zvinhu zvinowirirana sekutsigirwa uye kutemwa muzvikwere. Zvino Carpet Matiles anoshandiswa zvakanyanya, senge mahofisi, makamuri emusangano, mahotera, zvikoro, nhandare nedzimwe nzvimbo dzine denser traffic
Mangani marudzi eKapeti Matiles aripo?
Zvinoenderana nemhando yemavara, iyo yakakamurwa kuita jacquard kapeti uye yakajeka mavara kapeti;
Zvinoenderana nekapeti yepamusoro zvinhu, zvinogona kuve zvakakamurwa kuita matayiloni kapeti mataira uye pp makapeti mataira;
Zvinoenderana nechepasi kumashure zvinhu, zvinogona kukamurwa PVC kumashure, Isina-yakarukwa Polyester kumashure, Bhitumini kumashure.
Zvinoenderana nehukuru hwacho hunogona kukamurwa kuita kapeti uye mataira ekapeti.
Ndehupi hunhu hwemhando yega yega yematepeti mataira?
Zvimiro zveNylon Carpet Tiles zvakapfava uye zvine kugadzikana kwakanaka. Ivo akakodzera nzvimbo dzine vanhu vazhinji. Mushure mekuchenesa, pamusoro pekapeti paita senge nyowani. Hupenyu hwebasa hunenge makore mashanu kusvika gumi. Dzimwe dzadzo dzinogona kupasa bvunzo yekudzivirira moto B1 bvunzo. Vatinoshanda navo vakashandisa DEGE Brand nylon kapeti mataira, ayo ave achishandiswa kwemakore mana uye achiri mune yakanaka mamiriro.
Nekudaro, polypropylene Carpet Matiles haana kusimba mukumira, kuruma kune inobata, hazvisi nyore kupinza mvura, hupenyu hupfupi hwebasa, uye kutarisika kwakashata mushure mekuchenesa. Hupenyu hwebasa ndewemakore matatu kusvika mashanu uye mutengo wakaderera pane matayiloni kapeti mataira. Polypropylene Carpet Matiles ane akasiyana mapatani uye anoshandiswa nevatengi vanochinja kazhinji.
Chii chinonzi Carpet Tiles mukana?
1. Iwo makapeti mataera anogona kuve chero musanganiswa wemapatani, uye kugona kwacho kunogona zvakare kuve kwekupokana. Inogona kuitazve zvimiro zvinoonekwa zvekapeti zvinoenderana nechinangwa chemuridzi kana manyorerwo enzvimbo chaiyo kuburikidza neyekugadzira collocation yemarudzi akasiyana, mapatani uye magadzirirwo. Iyo haingogone chete kuratidza yakasarudzika, yakapusa uye yekuvaraidza yakasikwa kuravira, asi zvakare kuratidza yakaoma, Iyo inonzwisisika uye yenguva dzose theme theme inogona zvakare kusarudza yazvino masitayiti ayo anoratidzira aesthetic maitiro senge avant-garde uye hunhu.
2. Iyo kapeti tile iri nyore kuchengetedza, kurodha uye kudzikisa, kutakura uye kugadzira. Iwo akakosha kutaurwa kwetapeti mataira ari 50 * 50cm uye makumi maviri zvidimbu / katoni. Zvichienzaniswa nekapeti izere, hazvidi hunyanzvi hwekumisikidza kurodha uye kuburutsa, uye hazvidi huwandu hwesimba revanhu kuti vatakure, ndoda kuzvipinza pakaoma kupinda murevheta. Naizvozvo, inonyanya kukodzera kupaka zvivakwa zvepamusoro-soro. Pamwe chete chaiwo nokurondedzerwa uye yakakunakira gungano, zvinogona zvikuru kuvandudza kunyatsoshanda paving.
3. Makapeti mataira ari nyore kugadzirisa. Makapeti mataera anogona kugadziridzwa chero nguva uye chero panodiwa. Zviri nyore kuchengetedza, kuchenesa uye kutsiva. Kune makapeti emunharaunda akapfeka uye akasviba, iwe unongoda kutora nekumisikidza kana kuachenesa rimwe nerimwe. Iko hakuna kudikanwa kwekuvandudza seyakazara-yakazara kapeti, iyo inoponesa kunetseka, kushanda nesimba nemari. Uye zvakare, iyo nyore disassembly uye kuungana kwetapeti tile inopa mukana wekugadzirisa panguva yakakodzera tambo uye pombi network michina pasi pevhu.
4. Hunhu hwesiketi kapeti ine akakosha ekudzivirira mvura uye hunyoro-chiratidzo hwakakosha kuita, saka inonyanya kukodzera kugadzira pasi pevhu kana zvivakwa zvepasi pevhu. Panguva imwecheteyo, kapeti tile ine zvakare yakanaka murazvo unodzora, antistatic zvivakwa uye yakanakisa yeiyo mativi kugadzikana uye chitarisiko chengetedzo.
Carpet Tiles Kubatsira
Carpet Tiles Magadzirirwo
100% Solution Yakasviba
300-900g / sqm
Stock / Gadzirisa maererano nezvinodiwa nevatengi
50cm * 50cm, nezvimwewo.
MOQ Yakasarudzika: 1000sqm
Pasina Pallet package.
Pasina Pallet Pasuru: 20bv / ctn, 5sqm / ctn, 900ctns / 20ft, 4500sqm / 20ft (22kgs / ctn); NePallet Package: 20ft: 20bv / ctn, 5sqm / ctn, 56ctns / nhovo, 10pallets / 20ft, 560ctns / 20ft, 2800sqm / 20ft (22kgs / ctn)
10-25 mazuva ekushanda mushure mekugamuchira dhipoziti
30% T / T pamberi uye 70% T / T mukati memazuva manomwe mushure mekugamuchira iyo B / L kopi) / 100% isingachinjiki L / C pakuona, Paypal kubhadhara etc.
Maitiro ekuisa Carpet Tiles?
Kazhinji, huremu hwemurwi wematepeti matairi angangoita 500-900 gramu pamamita mita imwe, uye huremu hwetete rakakora uye rakakora rakakwirira. Naizvozvo, kutsauka kurema kunokonzerwa nekapeti pamusoro kuri nyore kusiyanisa neziso rakashama. Iyi bvunzo nzira inogumira pakuenzanisa kweiyo imwechete kapeti yezvinhu
Maitiro ekutonga mhando yeCarpet Tiles?
Rudzi rwekugadzira Rudzi
Carpet Tiles Kurongedza Chinyorwa
Series Saizi / PCS PCS / CTN SQM / CTN KGS / CTN Huwandu / 20ft (Pasina Pallet Pasuru) Huwandu / 20ft (Iine Pallet Package)
DT 50 * 50cm 24 6 22 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
DS 20 5 18 800ctns = 4000sqm 56ctns / pallet, 10pallets = 560ctns = 2800sqm
TH / YH 24 6 26.4 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
DL800 / DL900 / DX / DM / DK 24 6 18 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
DA100 / DA600 / DA700 20 5 19.8 800ctns = 4000sqm 56ctns / pallet, 10pallets = 560ctns = 2800sqm
DA200 / CH 20 5 21.5 800ctns = 4000sqm 56ctns / pallet, 10pallets = 560ctns = 2800sqm
DE6000 20 5 17.6 800ctns = 4000sqm 52ctns / pallet, 10pallets = 520ctns = 2600sqm
DH2000 / DF3000 / DY7000 20 5 19.7 800ctns = 4000sqm 40ctns / pallet, 10pallets = 400ctns = 2000sqm
NA 26 6.5 18 800ctns = 5200sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 4160sqm
ZVAKAIPA BEV / BMA 24 6 18 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
PRH 24 6 20 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
Peo PNY / PHE PSE 100 * 25cm 26 6.5 20 800ctns = 5200sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
Carpet Tiles Kugadzira Maitiro
1 Muchina wekuruka
2 Gluing Muchina
5 Imba yekuchengetera zvinhu
3 Kutsigira Muchina
Pashure: Isina moto Nylon Carpet mataera TH Series
Zvadaro: Chazvino Carpet Matiles Ekushandisa Ekushandisa BAD-BEV Series
Carpet Matiles Kuisirwa Methord
1.Vhura chinamatira kapeti uye isa1 / 4 kapeti chinamirwa pasi pemataira ekutsigira
2.Seta yechipiri makapeti mataera kunze kwekutanga zvichienderana nhanho 1
3. Isa mamwe mataera kapeti trimly-kumucheto kumucheto kona
4. Dhinda mubatanidzwa mushure mekupedzisa matai kapeti kuisirwa
Carpet Matiles Kuisirwa Direction
Kune miseve inonongedzera kuseri kwemataira emakapeti, inoratidza iwo iwo mafambiro etafura pamusoro petafura pamusoro. Paunenge uchiteya, teerera kuenderana kweicho chinongedzo chemuseve. Kunyangwe kana iyo imwe nhamba yemuvara iri batch imwe chete, kungoisa mataira ekuteedzera ese akafanana, hakuzovi nemusiyano wekuona Naizvozvo, iyo kapeti yakaungana inogona kuzadzikisa zvinoonekwa zveyakajairwa yakakura kapeti. Kune yakakosha kana zvinoenderana neimwe kapeti pamusoro pehunhu hunhu (senge yakajairwa mitsetse kapeti pamusoro), inogona zvakare kuiswa yakatwasuka kana zvisina kufanira.
Yekutengesa Carpet Matiles Floor DY Series
Hofisi Carpet Tile PRH Series
3D Dhizaini Tile Makapeti DX Series
Polypropylene Carpet Hofisi Carpet Tile DH Series
Rima Bhuruu Matiles Carpet DT Series
China Loop Murwi Bhuruu Kapeti DK Series